Gallery Space – Myanm/art
Category: Gallery Space
Wrapped Womxn ပြပွဲဟာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ပန်းချီ၊ ချည်ထည်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ ကြွေထည် အပါအဝင် မီဒီယမ်အစုံ အနုပညာလက်ရာများကို ပြသသွားမယ့် ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာ လုံခြုံမှု၊ ကာကွယ်မှုနဲ့ အကာကွယ်ယူထားတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါဟာ စွဲမက်ခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူခြင်း ဟုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့… Read more “WRAPPED WOMXN”
Myanmar isareligious country. I am fascinated in the religious, spiritual and supernatural imagery and the role they play in shaping an individual’s identity or that… Read more “Hybridized Beings: Soe Yu Nwe”
If I say it’s True Seven Times by Moe Satt Assistant Curated by Thet Thet Nway Htwe I was born at Gymkhana Hospital, Yangon, in 1983. My… Read more “If I Say It’s True Seven Times”